Ezengqondo - Bezzia | Bezzia
Esinye sezici ezibaluleke kakhulu ukuze ube umfazi oqinile futhi ezizimele yi i-psychology noma amandla wobuntu kanye nokuzazisa okungaziqhayisa. Yingakho eBezzia, sifuna ukusiza bonke abesifazane ukuba bazithande, babe namandla benze izinqumo.
Kungakho kulesi sigaba sifuna ukukusiza ngezeluleko zokuthi ungabhekana kanjani nobunzima, ukuthi ungaxhumana kanjani nabangane bethu, umlingani noma umndeni noma ukukutshela okhiye bokuba ngabantu abanezinto ezicacile.
Yize singesizo izazi zokusebenza kwengqondo, sinemibono mayelana nalolu daba futhi singakunika amathiphu azokusiza ukuthi uthuthukise izici zangaphakathi zendlela yakho yokuphila. Sithemba ukuthi bazokusiza.
Ungaziphatha kanjani uma umlingani wakho ekusola ngakho konke
Ukusola umlingani wakho ngaso sonke isikhathi nganoma yini oyenzayo kuyizimpawu ezisobala zokuthi kukhona okungekho ...
Ukuhlukumeza ngokomzwelo kulezi zithandani
Por UMaria Jose Roldan kwenza Isonto eli-1 .
Ukuhlukumeza ngokomzwelo ngaphakathi kwezithandani kuyinto ejwayelekile futhi ejwayelekile kunalokho abantu abangacabanga. Ngiyazi…
Ukuhlala nomuntu onenkinga yokuphazamiseka kwengqondo kuyinto enzima impela, ikakhulukazi uma kungumlingani wakho. Akunjalo…
Abantu abangathembeki: Kukuthinta kanjani ukuphila kwethu?
Abantu abangathembi banomuzwa wokuthi abanakwethemba umuntu, noma cishe noma ngubani. Sikhuluma nge ...
Ungabasiza kanjani abashadayo ukulawula imizwa yabo
Ngamunye kufanele abe ophethe ukukwazi ukulawula imizwa yabo futhi abakhombise ukuthi bazizwa kanjani ngempela. Uma kwenzeka kuba…
Izingozi ezinhlanu zokuncika ngokomzwelo kumlingani wakho
Ngeshwa, namuhla abantu abaningi bathembele kumlingani wabo ngokomzwelo. Kusho ukuncika ...
Ungakuphatha kanjani ukuhlaselwa kokukhathazeka
Por USusana Garcia kwenza Izinyanga ze-2 .
Ukuhlaselwa kokukhathazeka noma ukuphazamiseka kwemizwa kungenzeka nganoma yisiphi isikhathi futhi kunoma ngubani, yize behlala benakho ...
Por UMaria Jose Roldan kwenza Izinyanga ze-2 .
Ngeshwa, ubudlelwano obunobuthi busekukhanyeni kosuku futhi kuyaqabukela lowo muntu ongazange ...
Ungakuthola kanjani futhi uhlale unogqozi
Isisusa yilokho okusiholela ekwenzeni izinto, ukufeza izinhloso zethu noma ngabe ...
Ungazi kanjani ukuthi kufanele sinikeze ithuba lesibili
Impilo igcwele izikhathi lapho kufanele unikeze amathuba wesibili, hhayi kuphela esimweni ...
Ungabuthuthukisa kanjani ubudlelwano bakho nomzimba wakho
Ukuzethemba kuyiphuzu eliyinhloko lokuzizwa ukhululekile kithi futhi sithuthukise ukuthi singobani. Wonke umuntu…
Ingabe kukhona ukudalelwa othandweni?